Wednesday, May 4, 2016 China, May 5, 2016 Douglas Karr
Ndichiri kutsvaga musoro wenyaya kushambadza, Zvakaitika pane infographic pa Mashambadziro Anoita Kuti Titenge. Iyo infographic pazasi inovhura nepfungwa yekuti makambani vakapfuma uye vane mirwi yemari uye ivo vanoishandisa kushandisa kwavo varombo vateereri. Ini ndinofunga iyo ndiyo nzira inokanganisa, inosuruvarisa, uye isingafungidzike.
Pfungwa yekutanga yekuti makambani akapfuma chete anoshambadza izano risinganzwisisike. Kambani yedu haina kupfuma uye, kutaura zvazviri, yaive nemakore akati wandei ekurasikirwa - asi zvakadaro takashambadzira. Kushambadzira, kunyanya kuburikidza nemadhijitari chiteshi, inodhura kwazvo. Iwe unogona kuisa $ 100 mune chero yemagariro kana yekutsvaga injini kubhadhara pane yekudzvanya account uye Push zvimwe zvakanangwa zvakanyanya kushambadzira kutyaira kuziva kune rako bhizinesi.
Maonero pabhizimusi haawirirane nematanho chaiwo munyika yemagariro venhau. About a kota yemabhizinesi ese anokundikana mukati memakore maviri ekutanga zvinoenderana nezvakawanda zvidzidzo. Ndichiri vanhu vanotenda kuti avhareji kambani inogadzira 36% purofiti margin, avhareji yemari yemari yekota ichangopfuura yaive 7.5% uye yepakati purofiti margin yaive 6.5%.
Chinyorwa chaAngie, semuenzaniso, chakaramba chichishanda pakurasikirwa uku chichishandisa mamirioni makumi masere emadhora pakushambadzira - nechikamu chikuru cheicho chinoenda kuzvitengesi zveterevhizheni zvaunowanzoona paterevhizheni. Nepo kambani yeruzhinji irikuwedzera mari yekota pamusoro pechina, ivo havana fuma. Havasi ivo chete vasina kupfuma, asi zvakare havasi kushambadzira kuti vatengi vavo vanzwe fuma. Chinyorwa cheAngie chinopa sevhisi yekuchengetedza vatengi vevashandi vepamba kubva pakubvamburwa kubva kune vakawanda vevashady vanopa kunze uko.
Kushambadzira kunoshanda pamatanho akasiyana; hazvina kujeka sekuedza kuti mumwe munhu atenge chinhu. Kwemakore gumi apfuura ezvinyorwa, kutsvaga, uye kushambadzira mumagariro, ndinotenda makambani ari kuwedzera kufarira chokwadi chekuti kushambadzira kunofanirwa kuve kwakadzika kupfuura kugadzirisa kusagadzikana kwevatengi. Inotarisirwa kushambadza kune vatengi vakafanana nevateereri vako inowedzera purofiti nekuwana uye nekuchengetedza vatengi vakakura.
Nei Uchishandisa Kushambadzira?
Hwaro hwekushambadzira kwese kungoziva. Kuzivisa kunodiwa kumakambani nekuda kwezvikonzero zvishoma:
Svika - Kuvaka chinodikanwa chechako chako, zvigadzirwa kana sevhisi, unofanirwa kukwanisa kusvika kune vateereri vatsva. Vateereri ivavo vatovapo pamawebhusaiti, tsvakiridzo, vezvenhau, redhiyo, terevhizheni, nemamwe masvikiro. Kuti usvike kune avo vateereri, makambani akaisa mari uye akawana iwo anopa kushambadza.
Maonero - Pamwe vanhu vatove kuziva zvigadzirwa zvako nemasevhisi asi vasina maonero akanaka ezita rako. Kupokana nemaonero asiriwo echiratidzo, dzimwe nguva zvinodikanwa (kana kutoshoropodza) kuti mabhurandi aise mari mukushambadzira.
Sales - Kutyaira kutengesa kuburikidza nekushambadzira kunogona kushanda, asi ndinokupikisa kuti utarise zvetsika nedhijitari kushambadzira kwevhiki uye uone kuti yakawanda sei yakatariswa kuderedza uye rokutengesa. Mune maonero angu, zviri kuderera. Kazhinji kazhinji kwete, isu tinoona kuti nepo kutengesa kuchikwanisa kuwedzerwa, makambani anovimba nazvo kwenguva yakareba anogona kudzikisira mhando yavo.
Kushambadza Kunoshanda Sei?
Mabhizinesi nevatengi zvakafanana vari kutsvaga kunatsiridza hupenyu hwavo uye kugona kwebhizinesi ravo. Kunyange chikamu chidiki chevagari chingave nekushomeka kunoshambadza kunoitisa mari, ndinotenda izvo zvishoma. Mune mawonero angu, ruzhinji rwekushambadzira kwenetiweki uye akawanda-nhanho emakambani ekushambadzira anoshanda mune ino nhandare. Wakambokokwa kune chimwe chezviitiko izvi? Iwo mhemberero dzakakura dzevanhu vanofara vakapoteredzwa padanho nezvivimbiso zvemasheki makuru, zororo uye kunyange mota kunyengetedza vashanyi kuti vape mari uye vatange kuitengesera. Vemma, chinwiwa chesimba MLM, yakanga ichangobva kuvharwa kwechinguva sechirongwa chepiramidhi.
Kunyange izvi zvakanyanyisa, hazvisi izvo zvakajairika. Tarisa chaicho Apple kushambadza uye hauzoone kudzikisira uye kupfuma nekukurumidza zvirongwa. Panzvimbo iyoyo, iwe unozoona nyaya dzevanhu vachisunungura yavo yemukati yekugadzira vachishandisa Apple zvishandiso uye software sezvishandiso. Cherekedza Kushambadzira kwaCoca-Cola uye iwe uchaona inotarisisa pazviitiko nenzvimbo dzavanoshambadzira kwazviri, kuyedza kuvaka chiziviso cherudzi apo ndangariro dzinofadza dzinoitika. Zvenguva pfupi yapfuura, ivo zvakare vaifanira kushanda pakufunga kwezvinwiwa zvinotapira uye njodzi dzehutano dzinomuka.
Kumwe kushambadzira kunoshanda pane zvinokurudzira kuchengetedza mari (discounts), asi kune zvimwe zvikonzero nei kushambadzira kuchishanda:
Vicinity - Dzimwe nguva kushambadzira kunongodiwa kuti upe vateereri vematunhu nenyaya yekuti une nzvimbo padhuze. Zvichida urikutsvaga NY style pizza padhuze, uye saka pizzeria yemuno inoshambadzira nzvimbo-yakavakirwa mazwi pakutsvaga kana kunanga kufarira pizza mukati mediyasi yakatenderedza yekudyira kwavo.
basa - Vazhinji vatengi varikunyatsoteerera kumabhizinesi ari kutarisa kugadzikana, kusiana, uye nekubatanidzwa kwenharaunda. Kushambadza kunogona kutora chinzvimbo chakakosha mukugadzirisa maonero easina kusimba, mubatanidzwa muhombe mune iri kupa zvipo uye kudzidza kubatsira nharaunda. Salesforce nguva pfupi yadarika yakagamuchira chikoro chemuno muIndipolis, kupa madhora zviuru makumi mashanu mune zvishandiso kuvabatsira.
tsvakurudzo - Unoenda kupi iwe uchitsvaga yako inotevera zororo, yako inotevera mota kutenga, yako inishuwarenzi, kana imwe hombe mari. Kushambadzira zvine ruzivo zvemukati kubatsira kudzidzisa vatengi uye mabhizinesi zvakaputika mumakore apfuura. Nepo chinangwa chiri chekuvaka kuvimba nechiremera nekupa iyo inodiwa tsvagiridzo, haisi nguva dzose yekupedzisira chinangwa chekutenga. Nguva zhinji iri kupa kwekutanga kana sekondari kutsvagisa iyo yakagovaniswa zvakanyanya. Ini ndinowanzowona kushambadza nezve zvemukati izvo zvingave zvinonakidza kushamwari dzangu uye ndozotumira kwavari.
Emotion - Kutaurisa nyaya kwakasvetukira kumberi kwenzira zhinji dzekushambadzira nekuti hazvingobatanidze pamoyo nevateereri, zvakare zvakagadzirwa kutungamira muoni kana muverengi kuburikidza nenyaya yacho. Vamwe vanogona kufunga pamusoro peizvi sekubiridzira, asi izvo hazvizivikanwe kune kushambadza kunoshanda kunomutsa manzwiro.
Kunyengetedza - Kushandisa manzwiro, kushambadzira kunowanzo nyengetedza. Dr. Robert Cialdini inotsanangura zvitanhatu zvemunyika zvese zvekunyengetedza izvo zvakave nesainzi kuratidza vateereri kushambadzira - kudzokerana, kushomeka, chiremera, kuenderana, kufarira nekubvumirana.
Uye Ngatirege Kukanganwa
Kana chinangwa chakaipa chekushambadzira chaive chekukurudzira kutengesa, ruzhinji harushande zvachose. Dai kushambadzira kwaive kwakaipa uye kunonyengera, isu tese taizomhanyira kuMcDonalds kunotora nguva nemhuri uye bhokisi reMcNuggets! Kushambadzira kunodhura uye, kazhinji kazhinji, kuchinja pfungwa uye kuwedzera kuziva. Kushambadzira, sedzimwe nzira zhinji dzekutengesa, chirongwa chenguva refu icho chine njodzi yakati wandei inosangana nacho.
Kushambadzira Kunotiita Sei Kuti Titenge?
Ini handisi kubvunza maitiro akanyorwa mune ino infographic, ndiri kubvunza kukurudzira. Kushambadzira hakusi kwekunyengedza kana kutya mumwe munhu mukutenga. Kushambadzira kunofanirwa kupinda mukunzwa kwechinangwa chikuru - asi izvozvo hazvireve kuti zvine hungwaru… zvinoreva kuti zvinoshanda. Pamwe ndinonzwa kusununguka kana zita iri raive Maitiro Ekushambadzira Anotikurudzira Kutenga. Handisati ndamboona kushambadza kwakandimanikidza kudzvanya, asi ini ndaona mamwe ma ads akarova zvakananga mune zvandinoda zvandakabaya.
Saka pachinzvimbo, vashambadziri vagadzira arry-uye-yechokwadi arsenal yeakasiyana masisitimu ayo ese anoitirwa kutarisisa vatengi. Uye kunyangwe isu tisingazvizive nguva dzese, aya marongero ese anoshanda zvakanyanya mushe.
Heano infographic yandiri kutsoropodza kubva Peji yewebhuFX.
Tags: shambadzazvizivisokushambadzasimbakuzivakubvumiranakusagadzikanaManzwirokushambadza kunoita kuti titengemashambadziro anoita seikushambadza kunoshanda seilikingmaonerokunyengetedzakunyengetedzakusvikakudzoreratsvakurudzomutoroKugonesa Kugonesachishomapedyopeji rewebhu fx
Ini ndinofunga chinonyanya kukosha chikamu cheshambadziro chiri kukurudzira. Kana mutengi asina chinokurudzira kutenga smth tine sarudzo mbiri. Kana gadzira zvinokurudzira (muenzaniso wakakwana iPhone) kana kukanganwa.
Aug 25, 2017 na1: 11 PM
Zvakanyatsofungidzirwa kunze. Kana vanhu vachifunga nezvekushambadzira ivo vanowanzo kanganwa nezve vaviri zvinhu. Kutanga, bhizinesi diki. Mabhizimusi madiki, kunyanya pakutanga, haana "brand". Chavanonyanya kuda iko kugona kusvika kune yakakwira nhamba yevanhu nemutengo wakaderera. Chete mushure mekuitika chaiko kwekutengeserana ndipo panogona kugadzirwa chiratidzo. Chavanonyanya kuda iko kugona kungoudza vanhu kuti masuo avo akavhurika uye vakagadzirira kuita bhizinesi.
Chinhu chechipiri chandinofunga kuti vanhu vazhinji vanokanganwa nezvacho ndechekuti kushambadza masvikiro nemakambani ekushambadza anoisa yavo mitengo. Mitengo yacho haina kuiswa mukuwirirana kwakanangana nezvinodiwa nebhizinesi diki. Ini ndinenge ndave kuda kubheja kuti akawanda marongero emitengo anongogadzirwa nemweya mutete. Kana makambani ekushambadzira nemasvikiro ekushambadzira akanyatsoitira hanya nezvevatengi vavo, vaizove nechokwadi chekuti kushambadzira kwavari kupa ndiko kukodzera kwakaringana uye zvakanyanya kukosha kuti bhizinesi ravari kushambadzira rinoita mari yakawanda saka rinobhadhara kushambadza.
nekuda kwekuti svikiro rekushambadzira rinosvika kuvanhu vane miriyoni iro risiri chiratidzo chekuti ivo ndivo vanhu chaivo, kuti vanhu ivavo vakagadzirira kutenga chigadzirwa kana sevhisi, kana kuti ivo vanoto farira chigadzirwa kana sevhisi. Mepaki dzese dzinouya kubva kumakambani ekushambadzira ndidzo dzinozokufumura kuXY kana Z. Ivo havamboti isu tichava nechokwadi chekuti tinofambisa vanhu kuenda pasuo rako. zvinonakidza kwandiri pavanotaura zvinhu zvakaita sekuti "hapana vimbiso mukushambadzira." Mhinduro yangu kune chirevo ichi yakagara iri, "kune vimbiso imwe chete mukushambadzira uye ndiko kuti uchanyatsotora mari yangu. Kunyangwe zvauinazvo zvinondishandira kana kuti kwete, uchanditorera mari. ”